Sida loo dayactir lagu keydsho Computer
> Resource > Free > Sida loo dayactir Computer fariisiyo Up
Inta badan dadka isticmaala computer la kulmay ay si lama filaan ah PC baraf, laftiisa dareysa iyo diiday in ay ka jawaabaan amarrada kasta. Tani waxay noqon kartaa niyad-jab ugu fiican ee times. Waxaa sida caadiga ah waxay ka dhigan tahay in xog kasta oo aad ka shaqeeya lagu lumin doonaa, sida marar badan ay khasab kugu noqoto in ay sameeyaan reboot nidaam.
Waxaa jira sababo badan oo lagu keydsho computer ku bilowdo, sida isagoo qoraalkii khalad ah darawallada qalab lagu rakibay, dhibaatooyin la xiriira software aad PC ama dhibaato qoto dheer diiwaanka iyo nidaam faylasha gudahooda. Waxay sidoo kale noqon kartaa natiijada hardware failure.
Haddii aad computer fariisiyo marka aad u bilaabida, waxaa laga yaabaa in aad leedahay barnaamijyo aad u badan oo socda hal mar. Hubi folder xawaaladaha iyo la baabi'iyo wax kasta oo barnaamijyada aan loo baahnayn oo ka bilaabaya inta lagu jiro waqtigan. Waxa kale oo habboon in aad baadho utility System qaabeynta in ay nadiifiso wixii barnaamijyada aadan rabin in toos ah u bilaabi iyo guuleysatey aad PC.
Marka shaashadda kombiyuutarka laga fariisiyo, waxaad isku dayi kartaa in la soo afjaro socda barnaamijyada via Manager Task ah, laakiin caadi ahaan waa in aad reboot iyo lumin xogta aad hadda. Iyada oo ku xidhan inta goor ee aad ku badbaadin shaqadaada, tan waxa ay arrin saameyn ah oo ku saabsan wax soo saarka iyo keeni xogta lagama maarmaanka ah in la badiyay.
Arrinta ah lagu keydsho computer sidoo kale waxaa sababi kara qalabka hardware aad u tiro badan oo ku saabsan nidaamka waqti isku mid ah. Waxaad u baahan doontaa si aad u hubiso in aad Device Driver si aad u aragto haddii ay jiraan wax fariimo ah oo ku saabsan qalabka khaldan.
Wax kastaba sababtu ha, u cajiib ah Wondershare PowerSuite Golden si dhakhso ah u xaliyo dhibaatada iyo soo celinta aad PC in si shaqo buuxda oo hufan. Qalabkani waxa uu awood badan waxaa ka buuxa utilities hawl dhamaan hawlaha nadiifinta waxaad u baahan doontaa in aad PC ka shaqeeya fiican loogama. Sidaas waxyaabo badan oo xumaan kara PC in qofna socon kartaa qalad iyo qalad code kasta yar iyo weyn. Ku dar iyaga qamaar, dhamaystirka hayaan iyo fulinta dhamaan hawlaha kale ee muhiimka ah in this, iyo dayactirka PC noqon kartaa shaqo wakhti buuxa! Haddii computer ee aan kala sooc lahayn fariisiyo ama kombiyuutarka fariisiyo markii aan waxtar lahayn, ha Wondershare PowerSuite Golden si deg deg ah in aan xoojinno si uu u xaliyo arrinta.
Wondershare PowerSuite Golden fiican ee lagu hayo diiwaanka nadiif ah, hagaajinta qaybaha drive disk adag iyo miisaska xijaab, helilahaa oo burburiyeyna furin, cloning drive adag oo si fiican loo hubin PC. Waa utility ee doorashada kalifay PC si wanaagsan loo daryeelay oo lagu kalsoonaan karo.
Sida loo dayactir Tcpip.sys Blue Screen Error